admin | BIG FM 101.2 MHz
Home » Author Archives: admin	Author Archives: admin	सातौ विग आईकन – ONLINE APPLICATION FORM
7th BIG ICON 2016नाम *थर *उप्नाम उमेर लिङ्ग *MaleFemaleOtherशिक्षा *ठेगाना *Street AddressApt, Suite, Bldg. (optional)CityState / Province / RegionPostal / Zip CodeAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBhutanBoliviaBosnia and HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCentral African RepublicChadChileChinaColombiComorosCongo (Brazzaville)CongoCosta RicaCote d\_'IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast Timor (Timor Timur)EcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFijiFinlandFranceGabonGambia, TheGeorgiaGermanyGhanaGreeceGrenadaGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, NorthKorea, SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalQatarRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint VincentSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited States of AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamYemenZambiaZimbabweCountryसंपर्क टेलिफोन *मोबाईल नं *ईमेल *पेशा कार्यालयको ठेगाना कार्यालयको फोन अभिभावकको नाम थर *अभिभावकको फोन रुचि *यस अघि कुनै गायन प्रतियोगिता ? YesNoभाग लिएको भए कुनमा र कस्तो नतिजा पाउनु भयो ? यस अघि गीत रेर्कड गराएको रेर्कड गराएको छ भने गीतहरुको बारे जानकारी यस प्रतियोगितामा कस्ता खालको गीतगाउने योजना छ यो प्रतियोगितामा किन भाग लिन खोज्नु भएको प्रतियोगिता हुनुअघि नै हामीलाई केहि सल्लाह दिन चाहनु हुन्छ भने यस फारममा नसोधिएको तर तपाईलाई भन्न मन लागेको केहि कुरा छ भने Please enter any two digits *Example: 12This box is for spam protection - please leave it blank:
लेखनाथ, १६ भदौ। सासंद रविन्द्र अधिकारीले अवको पढाई भनेको नैतिक र ईमान्दारीताको ज्ञान भएको हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कास्कीको लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १७ भरतपोखरीमा रहेको सरस्वती टिका माविको ५४ औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेलामा बोल्दै सासंद अधिकारीले पढाई एक प्रकारको सिकाई हो जाहाँ असल कुरा सिक्नु पर्छ जसका लागि नैतिकता र ईमान्दारीताको खाँचो रहेको विचार रहेको हुन्।
विद्यार्थीको शिक्षा जग हो,जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ भने जस्तै मावि तहमा अध्यनरत विद्यार्थीलाई असल कुरामात्र सिकाउन सकियो भने उनिहरुको भविश्य राम्रो हुनेमा जोड दिदै सासंद अधिकारीले सरस्वती टिका माविलाई आगामी दुई वर्ष भित्रमा नेपाल कै नमुना विद्यालय बनाउनका लागि शिक्षक र अभिभावकको भुमिका पनि महत्वपुर्ण हुने धारणा राखेका थिए।
संसदिय विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारीले आफनो क्षेत्रका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहरे गर्दै यस क्षेत्रको विकास हुदाँ आफुनो पनि ईज्यत रहने भएकाले आफुले पाएको राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई मध्यनजर राख्दै कास्कीको विकासलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेको छु उनको विचार थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यलय कास्कीका विद्यालय निरिक्षक रविमोहन आचार्यले छोटो समयमा सरस्वती टिका उच्च माविले निजी क्षेत्रका विद्यालय सरहको शिक्षा दिई कास्कीमा नै उदाहरणिय विद्यालय बन्न सफल भएकोमा खुसि ब्यत्त गरेका थिए।
विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ऋषिराम आचार्यको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका केन्द्रिय सदस्य बशन्तराज पाण्डे,लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठी,नेकपा एमाले लेखनाथ नगर समोन्वय समितिका सचिव मोहन गुरुङ,नेकपा माओवादी केन्द्रका अजुन मल्ल,भुपु भरतपोखरी गविसका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद अधिकारी,सल्लाकार धर्मराज अधिकारी,विद्याथी नम्रता काफले र मनोज गौतम लगाएतले गुणस्थरिय शिक्षाको आवस्यकताका वारेमा जोड दिएका थिए।
सोही अवसरमा विभिन्न दाँताहरुबाट स्थापना गरिएको अक्षयकोषबाट गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्राबिद्ध वितरण गरिएको थियो भने पुर्व शिक्षक रामजी प्रसाद अधिकारी र डिल्लीराम वराललाई सम्मान गरिएको स्थानीय युवा अशोक सेढाइले जानकारी दिए ।
पोखरा, भदौ १५ । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति कास्कीले जिल्लाको पुनर्संरचनाका लागि तीनवटा प्रश्ताव आयोगमा सिफारिस गरेको छ । करिब डेढ महिनाको निरन्तर अभ्यास पछि समितिले आयोगले दिएको अधिकतम संख्या र उपयुक्त विकल्प सहितको सिफारिस पठाएको हो ।
आयोगले कास्कीमा पाँचवटा स्थानीय तह रहने गरी क्षेत्र विभाजन गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । पहिलो प्रश्तावमा पोखरा उपमहानगरपालिकामा चापाकोट, कास्कीकोट, मौजा, पुरुञ्चौर र भदौरे तामागी गाविसका ३ देखि ९ नम्बर सम्मका वडालाई समेटेर पोखरा महानगरपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ । यस्तै लेखनाथमा रुपाकोट, सिद्ध, थुम्की, देउराली, हंसपुर, माझठाना र कालिका गाविसको १ देखि ५ नम्बर वडा समेटिएको छ । बाँकी रहेका मिजुरेडाँडा, भाचोक, सैमराङ, पार्चे, थुमाकोडाँडा, सिल्दुजुरे, नामार्जुङ र कालिका गाविसको ६ देखि ९ नम्बरसम्म वडालाई मादी गाउँपालिकामा समेटिएको छ भने माछापुच्छ«े, घाचोक, लाहाचोक, रिभान, ल्वाङघलेल, धिताल, धम्पुस र सार्दीखोला गाविस समेटेर माछापुच्छ«े गाउँपालिका बनाईएको छ । उता लुम्ले, सल्यान, दाङसिङ, घान्द्रुक, ढिकुरपोखरी र भदौरे तामागी गाविसको १ र २ नम्बर वडा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छ ।
समितिले उपयुक्त बिकल्पको रुपमा थप दुईवटा सिफारिस पनि गरेको छ । यि दुवै प्रश्तावमा पोखरा र लेखनाथ एउटै महानगरपालिकामा समेटिएको छ ।
दोश्रो प्रश्ताव अनुसार पोखरा र लेखनाथ एउटै स्थानीय तहमा रहेपनि रुपाकोट, सिद्ध, थुम्की, देउराली र हंसपुर गाविसलाई रुपा गाउँपालिका बनाईएको छ । अरु गाउँपालिकामा एक नम्बरको प्रश्ताव अनुसार नै गाविस समेटिएको छ । समितिको सिफारिसमा कास्कीमा सात स्थानीय तह रहनेगरी अर्को प्रश्ताव पनि तयार भएको छ । जसमा माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण गाउँपालिका यथावत छ भने अरु ५ वटा स्थानीय तह पहिलेको भन्दा फरक छ । सिफारिसमा पोखरा र लेखनाथ सहित मौजाका २, ४ र ७ देखि ९ नम्बर वडा, पुरुञ्चौर, कालिका गाविसका १ देखि ५ नम्बर वडालाई महानगरपालिका बनाईएको छ । यसअघि लेखनाथ नगरपालिकामा समायोजन गर्ने भनिएका रुपाकोट, थुम्की, सिद्ध, देउराली र हंसपुर एउटा छुट्टै गाउँपालिका परिकल्पना गरिएको छ भने मिजुरेडाँडा, भाचोक, सैमराङ र माझठाना गाविस पनि अलग्गै गाउँपालिका बन्नेछ । पार्चे, थुमाकोडाँडा, सिल्दुजुरे, नामार्जुङ, कालिका ६ देखि ९ र मौजा गाविसको १, ३, ५ र ६ नम्बर वडा अर्को गाउँपालिका बनाईएको छ । यसअघि पोखरा महानगरपालिका गाभ्ने भनिएका चापाकोट, कास्कीकोट, भदौरेको ३ देखि ९ नम्बर वडा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा रहेको ढिकुरपोखरी गाविसलाई पनि छुट्याएर नयाँ गाउँपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ ।
अघिल्ला दुई प्रश्तावमा प्रत्येक स्थानीय तहको वडा संख्या समेत विभाजन गरिएको छ भने अन्तिम प्रश्तावमा वडा तोकिएको छैन । पहिलो प्रश्तावमा पोखरा महानगरपालिकामा ३२ वडा, लेखनाथ नगरपालिकामा १४, मादी र माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा समान ८ वडा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ६ वटा वडा विभाजन भएको छ । दुई नम्बर प्रश्ताव अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा ३५ वडा, रुपा गाउँपालिकामा ५, मादी र माछापुच्छ«ेमा ८÷८ तथा अन्नपूर्णमा ६ वडा कायम हुनेछ । कायम भएका वडामध्ये महानगरपालिका र नगरपालिकामा वडा समेत गाभिएको छ भने गाउँपालिकामा साविकका एउटा गाविसलाई न्यूनतम एक वडा रहनेगरी सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले सिफारिस गरेको पहिलो प्रश्ताव नै आयोगको मापदण्ड विपरित छ । आयोगले एउटा गाउँपालिकामा कम्तिमा २५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएपनि १६ हजार सम्म जनसंख्या रहेको भूभागलाई गाउँपालिकाको रुपमा प्रश्ताव गरिएको छ । उता दुई नम्बर प्रश्तावको गाउँपालिकामा १५ हजारसम्म कायम गरिएको छ भने तीन नम्बर प्रश्तावमा ९ हजारसम्म जनसंख्या रहेको गाउँपालिका बनाईएको छ । समितिले केही स्थानीय तहको केन्द्र प्रश्ताव गरेपनि केही स्थानीय तहमा सम्भावित ठाउँलाई पनि केन्द्र रहन सक्नेगरी सिफारिस गरेको छ ।
यस बिषयमा मंगलबार राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल भएपनि निष्कर्ष ननिस्किएकाले बुधबार विहान थप छलफल गर्ने तयारी भएको छ । यद्यपी बुधबारसम्म आयोगलाई समितिले सिफारिस पठाईसक्ने समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले जानकारी दिए । हामीले लामो समयसम्म सरोकारवालाको गहन छलफल पछि तीनवटा प्रश्ताव तयार गरेका हौं, उनले भने–यसमा मापदण्ड भन्दा बढी सुविधा र पायक पर्ने भुगोललाई प्राथमिकता दिएका छौं । कास्कीका केही गाविसहरु हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भएकाले हिमाली मापदण्ड कायम गर्नका लागि पनि सिफारिस लेखि पठाएको उनले बताए ।
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ८ भदौ / शहरबजारमा सबैको भान्सामा खाना पकाउने सिलिण्डर ग्याँस रहेकै हुन्छ । थोरै असाबधानीले पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको घटना हामीले देख्दै सुन्दै आएका छौं । बुधबार विहानै पोखरा १७ छोरेपाटनमा ग्याँस सिलिण्डर लिक हुँदा पनि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ ।
स्थानीय सिमलटुडामार्ग स्थित भक्तबहादुर गुरुङको घरको किचन ग्याँस लिकेज हुँदा क्षतविक्षत भएको छ भने किचनका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु काम नलाग्ने गरी बिग्रिएका छन् । फ्रिज, राईसकुकर, फिल्टर लगायतका भाँडाकुँडा मात्र होईन, छानो नै उडेको थियो । जस्तापाता उडेको, फलामको डण्डी बांगिएको र झ्यालका सबै सिसाहरु फुटेको अवस्थामा थियो ।
बिहान ५ बजेतिर ठूलो विस्फोट भएपछि घटनाबारे थाहा भएको सिमलटुंडा टोल विकास समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका छिमेकी गुप्तबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । टिनको छानो भएको घर भएकाले मात्र ठूलो क्षति हुनबाट टरेको उनले जनाए । ‘बेलुकीदेखि नै ग्याँस लिक भएको रहेछ । रातभरी रेगुलेटरबाट ग्याँस लिक हुँदा छानोको जस्तानै उडेर विस्फोट भयो’ उनले भने– ‘झ्यालढोका पुरै बन्द भएको र हावा नछिरेको कारण नै यसरी ग्याँस लिकेजपछि विस्फोट भयो । यदि ठूलो घर भएको भए ध्वस्त हुने रहेछ ।’
उनका अनुसार अर्को कोठामा छोरा सञ्जय र उनकी श्रीमती सुतेका थिए । भक्तबहादुर नजिकै छोरीको घरमा सुत्ने गरेका कारण मानवीय क्षति हुन नपाएको उनले बताए । ज्वलनशील पद्धार्थ नभएका कारण ग्याँस कोठाभरी भरिँदा पनि आगलागी नभएकाले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको बताईएको छ । घटनापछि प्रहरी पुगेको थियो ।
झापा, १ भदौ / नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले झापाका बाढी पीडितलाई सहयोग गरेको छ । मुस्लिम बाहुल्यता रहेको झापाको पाठामारी गाविसका ४ सय परिवारलाई ईक्यानले राहत सामाग्री उपलब्ध गराएको हो । चामल, नुन, चिनी र दाल गरेर ४ लाख बराबरको सामाग्री इक्यान मार्फत पीडितलाई बाढिएको हो । पाठामारी गाबिस सचिब बाबुराम पोखरेलका अनुसार उक्त गाबिसमा करिब ११ सय परिवार बाढी पीडित छन ।
इक्यान मार्फत भने गाबिसका एक, दुई, तीन वडाका ४ सय पीडित परिवारलाई सामाग्री बितरण गरिएको थियो। बिभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, प्रहरी प्रशासनको उपस्थितीमा इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले राहत हस्तान्तरण गरे । पाण्डेले आफु आबद्ध संस्थाले केहि पीडितलाई थोरै भएपनि राहत प्रदान गर्न सकेकोमा खुशी ब्यक्त गरे । अझ मुस्लिम समुदायमा राहत सामाग्री वितरण गरेर एउटा राम्रो सन्देश दिन सकेको पाण्डेको भनाइ थियो ।
इक्यानको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थाले यस्ता गतिविधि गर्दै आईरहेको जनाएको छ । समाजमा सकारात्मक काम गर्न इक्यान सधैँव तत्पर रहने इक्यान सचिब तथा सिएसआर विभाग प्रमुख देवीदास भट्टराईले बताए ।
रञ्जन अधिकारी पोखरा, १ भदौ / किशोरावस्थामै प्रेम । त्यसपछि आफुखुशी विवाह । अन्तर्जातिय सम्बन्धका कारण परिवारको अस्विकृति । सम्बन्धमा खटपटपछि सम्बन्ध विच्छेद । २१–२२ वर्षकै उमेरमा दुवैको ज्यान गयो । पोखरामा बुधबार दिउँसै स्याङ्जा पौवेगौंडे गाविस वडा नं. २ की सोनम रेग्मीले सम्बन्धमा खटपट भएकै कारण २१ वर्षकै उमेरमा ज्यान गुमाएकी छिन् ।
पूर्वपति स्याङ्जा किचनास गाविस वडा नं. ३ का संजीवबहादुर नेपालीले सोनमको विभत्स तरिकाले हत्या गरेका हुन् । २२ वर्षीय नेपाली र २१ वर्षीया रेग्मीबीच सम्बन्ध विच्छेद भईसकेको थियो । रेग्मी पोखरा ८ चालिसेमार्ग स्थित दामोदर चालिसेको घरमा विगत चार महिनादेखि डेरा गरी बस्दै आएकी थिईन् । बुधबार अपरान्ह पाँच बजेको समयमा रेग्मीको डेरामा पुगेर उनले खुकुरी प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार युवक एक्कासी आएर रेग्मीलाई कोठाबाहिर निकालेर आँगनमै हत्या गरेका थिए । घाँटी र पेटमा पटकपटक छुरी रोपेर हत्या गरेको देखिन्छ । घटनास्थलमा प्रहरी पुग्दा सञ्जीव सोनमसँगै लडेको अवस्थामा भेटिएका थिए । कार्यक्षेत्र रहेको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी निरीक्षक मोहनमणि अधिकारीका अनुसार सोनमको हत्यापछि सञ्जीवले विष सेवन गरेका थिए ।
‘निलो ब्यागमा सबै डकुमेन्ट थिए । सुसाईड नोट समेत सँगै थियो । दुई ओटा मोबाईल, दुवै जनाको नागरिकता, सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्र र विषको डिब्बा नजिकै थियो ।’– ईन्सपेक्टर अधिकारीले भने– ‘मार्ने र मर्ने नियतले आएको भेटियो । कोठाबाट बाहिरै गेटभित्रको आँगन प्राङणको कुनामा हत्या गरेको थाहा पाउनासाथ हामी पुग्यौं ।’ यद्यपी, प्रहरीले तुरुन्तै सञ्जीवलाई गण्डकी मेडिकल कलेज, नयाँबजार पु¥याएपनि साँझ ६ः१० मा सञ्जीवको पनि विष सेवनका कारण ज्यान गएको छ । अहिले दुवै जनाको शव पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पु¥याईएको छ ।
स्थानीयका अनुसार सञ्जीव र सोनमले किशोर उमेरमै अन्तर्जातिय विवाह गरेका हुन् । उनीहरुलाई घरपरिवारले स्वीकार गरेका थिएनन् । उनीहरुबीच पनि राम्रो सम्बन्ध थिएन । यसअघि, पटक पटक श्रीमानश्रीमतीबीच प्रहरी कार्यालयसम्मै पुगेर मेलमिलाप गरिएको र केहि महिना अघि मात्रै सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सञ्जीव दुबई गएर दुई महिनामै फर्केका थिए । सोनम चालिसेमार्गमा डेरा गरी बस्दै आएकी थिईन् ।
सञ्जीवले लेखेको सुसाईड नोटमा पनि सोनमलाई सम्बोधन गरी सम्बन्ध राम्रो नभएको र अब दुबै नरहने उल्लेख गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरुबीच के कारण सम्बन्ध बिग्रिएको भने खुलेको छैन । तर सञ्जीवले सोनमलाई छाड्न नसक्ने, अन्र्तजातिय कारण सोनमले साथ दिन नसकेको, परिवारको साथ नपाएको कारण नै जघन्य अपराध भएको हुनसक्ने प्रहरीको पुर्वानुमान रहेको छ ।
सञ्जीवले सोनमको हत्या गर्दा घरभेटी र छरछिमेकी कसैले पत्तो पाएनन् । सञ्जीव नचिनिने तरिकाले मास्क लगाएर आएको देखिन्छ । सोनमको घटनास्थलमै ज्यान गईसकेपछि मात्र उनलाई पनि संगै लडिरहेको अवस्थामा भेटिएको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी गजुसिद्धी बज्राचार्यले जानकारी दिए ।
पोखराका बिग एफएम र आदर्श समाज दैनिक बाहेक यो समाचार कपी गर्ने ले कृपया श्रोत खुलाईदिनुहोला ।) पोखरा जेसीजको मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण तालिम तथा सम्मान
रञ्जन अधिकारी पोखरा, ३१ साउन / जेसीआई पोखराको आयोजना तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रिय कार्यलयको सहकार्यमा मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण तालिमको आयोजना गरिएको छ । मानव अधिकार, मानव अधिकार रक्षकको भुमिका, नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रशिक्षण दिईएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रिय कार्यलय प्रमुख सुर्य बहादुर देउजा र मानव अधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदीले प्रशिक्षकको रुपमा सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा जेसीआई पोखराका करिव ५० जना सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
पोखरा जेसीजका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव सन्तोष शाहीले गरेका थिए भने कार्यक्रमका संयोजक मानव अधिकार सेल संयोजक देवराज शर्माले स्वागत गरेका थिए । अमेरिकाको सेन्ट लुइसमा मुख्य कार्यालय रहेको जेसीआईले संयुक्त राष्ट्र संघसँग मिलेर विश्वभर मानव अधिकार सम्बन्धी क्रियाकलापहरु गर्ने गर्दछ । वर्ष २०१६ मा नाइजेरियाका पास्कल डाइक जेसीआईका अध्यक्ष छन् । यो वर्ष शान्ति संभव छ भन्ने अभियान जारी छ ।
सोहि अवसरमा जेसीआई पोखराका २००७ का अध्यक्ष दयाराम गौतम पुनरावेदन बार एसोसियसन पोखराको अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएकोमा र २०११ का अध्यक्ष रविन्द्र गुरुङ्ग जेसीआई नेपालको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएकोमा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना समेत गरियो ।
उक्त कार्यक्रममा पुर्व अध्यक्षहरु सिनेटर विष्णु बहादुर थापा,सन्तोष पोखरेल, इश्वर प्रसाद कर्माचार्य, नारायण शर्मा, वसन्त उदास र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रिय निर्देशक सुर्य बहादुर देउजाले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले जेसीआई पोखरा नेपाल भरिकै उत्कृष्ट शाखाहरुमध्ये एक रहेकोले यतिवेला पुनः जेसीआई नेपाल हाँक्ने जिम्मेवारी जेसीआई पोखराका पुर्व अध्यक्षलाई अवसर मिलेको बताए । अबको छोटो अवधीमा धेरै काम गर्नुपर्ने, युवाहरुको लागी उत्कृष्ट कार्यहरु गरि जेसीआई पोखराको छविलाई उच्च बनाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो शाखाको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम नगर्ने, जेसीज अभियान लाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन पहल गर्ने बताउँदै यो वर्ष युवा सम्बन्धी नेपाल भरि विभिन्न सेमिनार र गोष्ठिहरुको आयोजना गर्ने, नेपाल भरिका शाखाहरुमा अर्थ संकलनका विभिन्न योजनाहरु ल्याउने प्रतिवद्धता प्रकट गरे ।
पोखरा २० साउन । अग्रज पत्रकार रुद्रबहादुर थापा बालकृष्ण उग्रतारा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार –२०७३ बाट सम्मानित भएका छन् । पोखरा एक्सप्रेस पत्रिकाका संस्थापक प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक स्वर्गिय बालकृष्ण उग्रताराको स्मृतिमा उनको परिवारद्धारा स्थापित तथा सोहि पत्रिकाद्धारा संचालित पुरस्कारबाट विहिवार थापालाई सम्मान गरिएको हो ।
प्रेस स्वतन्त्रताका सेनानी केशबराज पराजुलीले थापालाई नगद २० हजार १ सय ११ रुपैया र सम्मानपत्र सहित सम्मान गरे । पत्रकार तिलक पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित प्रतिभा छनौट समितिले थापालाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । थापा मगर पत्रकार संघ कास्कीका अध्यक्ष हुन् । पोखराको आदर्शसमाज दैनिकमा सहायक सम्पादक समेत रहेका थापा हालैमात्र २५ वर्ष सेवा गरी निवृत्त भएका थिए । उनी साहित्यकार समेत हुन् ।
पश्चिमाञ्चलमा क्रियाशिल कम्तीमा १५ बर्ष पत्रकारिता गरेका पत्रकारलाई यो पुरस्कार प्रदान गर्ने गरिन्छ । यो पुरस्कारबाट यसअघि पाल्पाका मेघराज शर्मा, कास्कीका कुशुमकेशव पराजुली, पर्वतका भोलानाथ शर्मा कास्कीका नवराज सुवेदी र नारायण कार्की सम्मानित भैसकेका छन् ।
कार्यक्रममा पुुरस्कृत ब्यक्तित्वको बारेमा स्वतन्त्र पत्रकार संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद वास्तोला, स्व. वालकृष्ण उग्रताराको बारेमा पत्रकार नवराज सुवेदीले जानकारी गराएका थिए ।
१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी विमल घर्तीमगरले आफ्नी बहिनी मनिषाको ‘हत्या’ गर्नेमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आजसम्म देशको लागि लडेको भन्दै उनले अब ‘बहिनीको लागि लड्ने’ फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘सानो छँदा बाबु गुमाएँ । बाबु पनि देशको लागि लड्नुहुन्थ्यो । बिस्तारै त्यो पीडा भुल्दै जाँदा आज १० वर्ष भएको थियो । आज अर्को पीडा थपियो मेरो परिवारमा । मैले पनि देशका लागि कति गरेँ, तर मेरो घरमा यस्तो हुँदा सरकारले केही गरेन भने यो देशका लागि गरेर के काम । एउटा आज देशको लागि गर्ने मान्छे सुरक्षा छैन भने अरु आम नेपाली जनता कसरी बस्नु यो नेपालमा मेरो बहिनीको हत्या गर्ने मान्छेलाई कारवाही भएन भने यो देशको लागि के गर्नु । आज म रोइ रहेको छु, भोलि अरु कोही रोइरहेको होला । मलाई सबको साथ चाहिएको छ । अब देशको लागि लडें अब बहिनीको लागि लड्छु ।’
रञ्जन अधिकारी पोखरा, १८ जेठ / एसएलसी दिएर फुर्सदमा बसेका विद्यार्थीका लागि उत्प्रेरणामुलक कार्यक्रम हुने भएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ‘लक्ष्य प्राप्ति’ शीर्षकमा परामर्श तथा उत्प्रेरणामुलक कार्यक्रम पोखरा जेसीजले गर्न लागेको हो ।
जेसीज वीकइण्ड कार्यक्रम अन्र्तगत पहिलो दिन जेठ २१ गते विद्यार्थीहरुको रुची र क्षमता अनुसार विषयगत विकल्पहरुको जानकारी सहित सम्बन्धित विषयमा जानकार व्यक्तिद्वारा परामर्श दिने कार्यक्रम छ । पोखरामा ४२ वर्ष अघि स्थापित युवाहरुको सामाजिक संस्था पोखरा जेसीजको तीन दिने वीकइण्ड कार्यक्रम जेठ २३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । जेसीजले वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विविध सामाजिक कार्य गर्दै वीकईण्ड मनाउँदै आएको हो । दि भिलेज रेष्टुरेण्ट, चिप्लेढुंगाको सभाहलमा मध्यान्हदेखि हुने कार्यक्रममा उपस्थित हुन सबै एसएलसी दिएर बसेका विद्यार्थीलाई आग्रह गरिएको छ । हिसान नेपाल लगायत शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा हुने पहिलो दिनको कार्यक्रमको संयोजन जेसी प्रकाश घिमिरे र जेसी देवराज शर्माले गरेका छन् ।
दोस्रो दिन निःशुल्क दन्त शिविर तथा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम हुनेछ । पोखरा २० भलाम स्थित साविक गाविस भवन प्राङ्गणमा हुने संयोजक सुवास सुवेदीले जानकारी दिए । सृजनशील युवा क्लब, ह्याप्पी डेण्टल केयर र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कास्कीको सहयोग रहेको छ । अन्तिम दिन भरतपोखरी स्थित अन्नपूर्ण स्वास्थ्यचौकी परिसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम हुनेछ । जिल्लाबन कार्यालय र कारितास नेपालले यस कार्यमा सहयोग गर्नेछ । संयोजकद्वय जेसी भाइराज राना र जेसी यज्ञपुरुष रिजाल रहेका छन् ।
जेसीज वीकइण्डका मुल संयोजक समेत रहेका पोखरा जेसीजका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष जेसी शिव सुवेदीले सामाजिक क्रियाकलापमा युवाहरुको संलग्नता बढाउँदै सामाजिक संस्थाको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पुरा गर्ने हेतुले वार्षिक रुपमा समाज लक्षित कार्यक्रम राखिएको बताए । उनले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई लाख ४८ हजार खर्च लाग्ने र सो रकम विभिन्न संघसंस्था तथा जेसीज सदस्यहरुबाट संकलन गरिएको जनाए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गरेका पोखरा जेसीजका अध्यक्ष जेसी गोविन्दप्रसाद देवकोटाले विद्यार्थीहरुलाई उचित विषय छनौटमा सघाउ पु¥याउन, स्वस्थ जीवनयापनका लागि समाजमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउन, वातावरण दिवसका अवसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरी यस पटक वीकइण्ड मनाउन लागेको बताए ।
गत वर्ष आईटी क्षेत्रबारे युवाहरुको कन्फरेन्स, निशुल्क दन्त तथा स्वास्थ्य परीक्षण र विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुबीच कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो । कार्यक्रममा सामुदायिक विकास क्षेत्र उपाध्यक्ष जेसी महेन्द्र सापकोटाले स्वागत तथा महासचिव जेसी सन्तोष शाहीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
Page 1 of 2112345	»	1020...Last »	7th BIG ICON 2016